Top 4 iPod Transfer Tools si ay u gudbiyaan Music / Vidoes / Photos in Computer
> Resource > iPod > Top 4 iPod Transfer Tools
Waxay noqon kartaa niyad jebinaysaa inuu go'aansado inuu dooranaya badan in muddo ah iPod software kala iibsiga. Waxaa dhab ahaan u samayn kartaa in aad waalan gaar ahaan marka qalabka yabooho wax la mid ah ku dhawaad ​​in aad. Sidaas, sida in la go'aansado software bixiyaa qaababka ugu wanaagsan? Waxaan ku soo ururiyeen qalab ee faahfaahin ah waxaad u si aad u barato si ay u xalliyaan si fudud.
Wondershare Runtii samayn kartaa yaabab. Iyadoo tan oo sawirro ku leedahay meelo iPod, Wondershare TunesGo waa software kama dambaysta ah si ay u maareeyaan files kuwa. Xitaa waad tirtiri kartaa sawirro badan oo ka iPod oo bilaash ah meel ka mid ah.
In qasabno yar, waxaad soo celin karaa Lugood Library xitaa marka aad illowday in aad dib up. Iyada oo kaliya click hal, music ka iPod si toos ah dari doonaa in aad Lugood Library on your computer. Nooc kasta oo file ka video guuldarro music awoodo in la soo celiyo mar kale ka iPod. Software waxay kaloo bixisaa fikrad aad u fiican, waayo, iPod file kala iibsiga ka qalab aad si aad PC. Waxaad xitaa karaa heerka ama ka gudub.
Download maxkamad version of Wondershare TunesGo (Window) ama Wondershare TunesGo (Mac)!
Soo Celinta maktabadda music itune ka iPod;
Meesha dareen leh;
PC dib-up karti;
Rid iyo feature jiitaa,
Samee album sawir ku iPod;
Labada qeybood oo Windows iyo Mac waxaa laga heli karaa;
CopyTrans waa iPod qalab wax ku ool ah kala iibsiga kuu ogolaanaya inaad si ay u dajiyaan videos, music, filimada si fudud. Iyadoo click hal, aad awoodo songs gurmad iyo barnaamijyadooda. Waa maxay dheeraad ah, qalabka gelineya inaad u hagaagsan iyo ringtones, buugaagta, audio, arts wareejiyo ka iyo maktabadda Lugood aad.
Hal-guji feature kala iibsiga fudud iPod;
Dajiyaan Kaliya faylasha aad u baahan tahay aan arrinta hal hawl ah;
Save kuwan raadkaygay, videos, iyo tags u gurmad;
Apps ma lagu dari karaa si software ah;
No version u dhiganta u Macintosh;
IPod kale qalab music kala iibsiga waa iRip . Waa awoodaan si ay u gudbiyaan files iBook, waana wax software ugu ma aan samayn karo. Waxaad wax ka iPod in PC ama hab wareega kale ku wareejin karaa. Sida aalad awood u kala iibsiga file iPod, iRip awoodo inuu dhawro faahfaahsan tiniest macluumaad ah ee aad file oo ay ku jiraan macluumaadka Meta sida tirada bood, ratings, iyo farshaxanka album. Haddii aad isku aragto lunsan oo maktabadda warbaahinta in wadid aad u adag, ka dibna qalab tani waa shay waa in aad kala soo bixi. Waxay kaa caawinaysaa in la soo celiyo files maktabadda warbaahinta.
awood u leeyahay inuu badbaadiyo maktabadda oo dhan;
feature fudud in soo dejinta iyo dhoofinta files;
MP3 kala iibsiga, MP4, TXT, iwm;
version xorta ah ayaa feature xaddidan;
waxa ay qaadataa waqti gaabis ah si ay u gudbiyaan;
Haddii aad isku aragto lunsan oo maktabadda warbaahinta in wadid aad u adag, ka dibna qalab tani waa shay waa in aad kala soo bixi. Waxay kaa caawinaysaa in la soo celiyo files maktabadda warbaahinta. Marka nidaamka ku dhacdaa shilalka, iCopyBot soo celin karo iyo dib u soo ceshano faylasha aad. iCopyBot waa iPod qalab music xor ah. Barnaamijku wuxuu kuu saamaxayaa inaad la wadaagto, badbaadin, iyo wareejiyo waxyaabaha iPod in PC hab sahlan.
wareejiyo files ay ka mid yihiin playlists ah;
content share qoyska iyo saaxiibada;
ilaaliyo iPod kulankii u hagaagsan aan loo baahnayn;
version maxkamad ayaa muuqaalada xaddidan;